Umculo noMdanso kusiko lamaVenda
Ingxenye Ebalulekile empilwen yamaVenda
Umculo nomdanso udlala ingxenye ebalulekile ekuphileni kukaVenda, okwenziwe emishadweni nasemingcwabeni, ezikoleni kanye nasezikoleni zokuqala, ukuphuza ubhiya kanye nemibuthano. Ukudansa kubalulekile nasemasontweni azimele lapho iVenda eningi engowakho. Abanye abaculi badlala umculo odumile nomculo, kodwa amafomu yendabuko avame ukufakwa ezinhlotsheni zanamuhla. Izingoma zomculo, umculo, ingoma nomdanso wokuveza ukudansa, namandla okuba nenkolo.
Izinsimbi eziningi eziye zanyamalala kwenye indawo e-Afrika zisasetshenziswa: i-malala (i-xylophone), i-mbira (i-piano ye-thumb), i-thsikona (amacilongo emhlanga), izinsimbi zomculo ezinezintambo, izigubhu ezihambayo, i-ngoma (izingoma zamabhasi) kanye ne-thungwa (izingoma ezifana ne-ngoma, kodwa ezincane).
AmaKhosi abe (futhi ayenayo) iqoqo le-tshikona, elikwazi ukukhombisa amandla abo nodumo, ngakho-ke, abantu babo. Izigubhu ze-Ngoma, esinye sezibonakaliso eziyinhloko zobukhosi, esikhathini esidlule badlala kuphela enkantolo. Izingane ezincane kakhulu zikhuthazwa ukuba zilingise izingoma nabadanso abadala. Lapho bekhulile, bahlabelela izingoma zezingane (songs of vhana): amaculo, ama-jingles alula emini, kanye no-ngano, kusihlwa, ikakhulukazi ekuvuneni (mavhuya-haya).
Lezi zinsuku ziyizingoma zomlando, ngokuvamile ezenziwe ngabantu abadala nabantwana bobulili bobabili. I-Dzhombo, ekhonjiswe ukuboniswa kanye nesenzo sokukhukhumeza, kwenzeka ngobusuku obusenyangeni ngenyanga e-mavhuya-haya. Amantombazane nabafana babhekana futhi, behambisana nokushaya, badansa phakathi kwemigqa. Udansa uthinta umuntu wobulili obuhlukile ukukhombisa okuthandayo. Izingoma ziyingqikithi futhi zixaka futhi ziyinkimbinkimbi kunezingoma kanye ne-ngano.
Imidanso eyinhloko eyenziwa abantu abasha ngaphambi komshado yi-tshikanganga no-tshigombela. Ziyingxenye ebalulekile yokuphila, kodwa ubufakazi bubonisa ukuthi abadala kakhulu. I-tshikanganga ngumdanso wokugadla lapho abafana bedlala khona ama-flute namantombazane abahamba nabo emathunjini kanye nezigubhu ze-mirumba. Yenzelwe injabulo, kodwa imvume kufanele itholakale kumuntu oyinhloko noma inkosi.
I-tshigombela, yamantombazane, ivela ngaphambi kokuvuna. Njengoba kuhambisana nesigubhu esisodwa kanye nezigubhu ezimbili zombukiso, intombazane iqala ingoma abanye bajoyine i-chorus; badansa ukulwa ne-clockwise bezungeza amadubhu, ingoma ye ingoma ikhuphuka. Umdanso we-malombo yisigaba sesibili sokwelashwa komuntu (ngokuvamile owesifazane) onomoya ongenamakhaya (tshilombo).
Uma owesifazane egula futhi umdwebi ubonisa ukuba khona kwe-tshilombo, ukwelashwa okukhethekile kuyadingeka. Esigabeni sokuqala, isazi (i-maine a tshele) senza lona wesifazane abe ngumbono, umenze awele, amphathe ngemithi futhi abuze umoya ukuthi azivelele yena kanye nezifiso zakhe. Ngakho-ke umoya usungulwa emzimbeni wesifazane ohluphekile (ophakathi), esikhundleni sokukhishwa.
Esigabeni sesibili, lo mphakathi ujoyina umphakathi wezidakamizwa ezingalungile zeziguli eziphulukisiwe ngaphambili. Umdanso uyenzeka endaweni yekhoro (egcekeni) lenkosi, oboleka umphakathi ezinye zezinsimbi zakhe. Umoya uvame ukuba owesilisa, futhi abesifazane abanamakhono bangaziphatha njengamadoda, bagqoke izingubo zesilisa (ama-waistcoats, izibopho nezigqoko) futhi baphathe izinto zesilisa (ukulingisa ama-assegais noma izinkomba ezincane). Lokhu kuye kwaholela ekukholweni ukuthi inkolo ye-malombo iyinhlangano ehleliwe ephikisana nobukhulu besilisa.